UDkt Shenuka Singh.
Imibono emisha ngokubaluleka kokugqugquzelwa kwezempilo yomlomo okunobufakazi ibidingidwa ocwaningweni olusanda kuphothulwa uMfundisi noMholi Kwezokufunda e-UKZN eMkhakheni Wezokwelashwa Kwamazinyo, uDkt Shenuka Singh.
Inkulumo ka-Singh eklonyelisiwe eMhlanganweni wezoCwaningo weKolishi LezeMpilo ibinesihloko esithi : “Izithiyo Zamasiko Ekugqugquzelweni Kwezempilo Yomlomo – Imiphumela Ezinhlelweni Zezempilo Yomlomo”.
Uzosebinzisa izi-R15 000 azizuzile emhlanganweni ukuze ahambele ingqungquthela ezoba kulelizwekazi (i-Afrika) ngonyaka ozayo ezobe inongoti kulo mkhakha.
U-Singh uthe indima nokubaluleka kobufakazi ekugqugquzelweni kwezempilo nokuhlelela ezempilo yomlomo, ikakhulukazi ubunjalo nesimo sobufakazi sekuke kwaba isihloko senkulumompikiswano enkulu. Ucwaningo lwakhe lukhombe izithiyo ezivimbela ukwamukelwa kwenqubo yezempilo yomlomo enobufakazi, ikakhulukazi lezo ezithinta ukugqugquzelwa kwezempilo yomlomo.
Uchazile ukuthi ekuqaleni izeluleko eziningi ebezinikwa iziguli abasebenzi bezempilo yomlomo bezingenabufakazi kodwa bezithathwa njengezizosebenzela zonke iziguli ezingamalungu emiphakathi. Bekuyaye kuphakanyiswe ukuthi isiguli sivakashele udokotela wamazinyo okungenani kabili ngonyaka kodwa kungenasizathu sezesayensi salokhu.
U-Singh ubeke ukuthi yize noma okwenziwa ngamakliniki ezempilo yomlomo kubalulekile kodwa umuntu ngamunye kumele aqwashiswe ukuze azinakekelele yena umlomo wakhe. Inselelo ukunika abantu ulwazi olufanele ukuthi lulethe ushintsho ekuziphatheni kwabo. Ucwaningo luka-Singh lugqugquzela ukuthi uhlelwa kokugqugquzelwa kwezempilo yomlomo nokwenziwa kwakho kususelwe ezinhlelweni nokuhleleka komphakathi ukuze kuqinisekiswe ukuthi wonke umuntu uneqhaza kwezempilo yomlomo nokunakekelwa kwawo.
‘Akusizi ukuthumela imyalezo efundisayo esikhaleni nje. SidingaI ukugqugquzela indawo enokweseka lapho wonke umuntu eqonda ukuthi ukuzinakekela kuyisiqalo sokuba nempilo jikelele.’
U-Singh uthe inhlanzeko yomlomo idinga ukunakwa kakhulu umuntu ngamunye njengenhlanzeko yonke nje, ukudla nokuphila ngendlela efanele. Umphakathi kumele ufunde ukuthi akusikho ukubamhlophe kwamazinyo kodwa ukucwebezela kwawo okubalulekile. Akubalulekile ubumhlophe kodwa ukucwebezela kwawo.
‘Yize abasebenzi bezempilo bengeke banikezele ngohlelo lokudla olusebenzela futhi olungenela iphakethe lawo wonke umuntu kodwa kubalulekile ukuthi abantu bazijwayeze izindlela ezilula zokuzinakekela njengokuxubha kabili ngosuku –ekuseni nasebusuku- besebenzisa umuthi wamazinyo oneflorayidi. Ukuhlanza amazinyo ngokuflosa noma ngamanzi emva kokudla kungasiza nakho ekususeni ukudla nokunye okusuke kungene phakathi namazinyo.”
U-Singh uthe kubalulekile ukuqonda ukuthi iziphuzo ezihlihlizayo, ukudla okunamfukayo nokunoshukela kanye nokunamakhabhohayidrethi amaningi kuneqhaza elikhulu ekuboleni kwamazinyo. ‘Okuyingakho ke kubalulekile ukuthi amaswidi adliwe nokudla kunokuwadla maphakathi nezidlo.’
Ukunakekelwa komlomo ngobufakazi kunike abacwaningi kulomkhakha ithuba lokubhekisisa abantu abaqeqeshelwe umsebenzi, ezezimali nokuthola izindlela ezinomqondo ezingasetshenziswa uma kukalwa ubufakazi mayelana nezifo zomlomo.
Ezinye izihloko ezivele kulolu cwaningo bekuyilezi: izithiyo ekwamukelweni kokugqugquzelwa kwezempilo yomlomo enobufakazi, izindlela ezingeyizo zokuhlola; ukusetshenziswa ngendlela engafanele kokuhlola ocwaningweni olususelwa ebantwini abayizakhamizi nokuntuleka koxhaso lwezimali.
‘Kubalulekile ukuhlanganisa ubufakazi nezinhlelo ezosiza imiphakathi; okungaba sezikoleni, emisebenzini, emakhaya, ukugqugquzela ukudla ngendlela enempilo, nokwakhiwa kwezinqubomgomo.’
U-Singh uthe amazinyo angama-28 kuya kwangama-32 akubantu abadala ayigugu kakhulu futhi angahlala impilo yonke uma nje ezothola ukunakekelwa okuvikelayo.